Hurumende Yoramba Kushanda neMasangano Anoita Zvematongerwo eNyika
Hurumende inonzi yakati haisi kuzobvuma kushanda nemasangano akazvimirira ega anopindira munyaya dzezvematongerwe enyika muhurongwa hwayo hwechikafu.
Dzimwe nzvimbo munyika dzinonzi dzakatarisana nenzara mushure mekunge mvura yaramba kunaya zvakatsarukana. Sangano renhau re IRIN rinoti gurukota rezvekurima, Va Joseph Made, rakavaudza kuti masangano e United Nations haasi kuzobvumirwa kupinda mumisha vachiita ongororo yekuona kuti nyaya yechikafu yakamira munyika.
Va Made vaudza Studio 7 kuti dare remakurukota rakawirirana kuti masangano akazvimirira ega anoita zvematongerwe enyika, haasi kuzobvumidzwa kupinda muchirongwa ichi. Va Made vati vacharamba vachishanda nemasangano e United Nations, asi haafaniri kupindira nyaya dzezvematongerwe enyika.
Vati pari zvino havasati vava kuziva kuti vanhu vangani vangada rubatsiro rwechikafu gore rino nekuti ongororo ichiri kuitwa.
Nyika inonzi iri kutarisira goho rakadzikira zvikuru mwaka uno zvichitevera zuva rakarova muna kukadzi iro rinonzi rakaparadza zvirimwa zvakawanda. Kunyange hazvo mvura yakazonaya mukupera kwemwedzi uyu, zvirimwa zvizhinji zvinonzi zvakanga zvatokuwadzwa mwoyo, izvo zvakaita kuti zvitadze kumuka zvakare.
Hurumende inoti ichiri kuita ongororo yekuda kuona kuti nyaya dzechikafu dzakamira seyi munyika. Asi vamwe vanoti havaoni ongororo iyi ichiburitsa chokwadi chaicho sezvo pane mashoko ekuti hurumende yakaramba kushanda nemamwe masangano akazvimirira oga mukuita ongororo iyi.
Mukuru werimwe remasangano anopa rubatsiro reCentre for Community Development in Zimbabwe, VaPhilip Pasirayi, vaudza Studio 7 kuti danho rehurumende, zvikuru kudivi reZanu PF ndere kuda kunyima rubatsiro rwechikafu kumatunhu ane vanhu vanoonekwa sevasingatsigiri Zanu PF.
Ishe Edson Chihota vanotiwo matunhu akawanda munyika haasi kutarisira goho rakanaka, sezvo zuva rakakanganisa zvirimwa zvakawanda, uye kushaikwa kwezvinodiwa mukurima kwakatadzisawo varimi vazhinji kurima zvavaida.
Hurukuro naVaPhilip Pasirayi pamwe naIshe edson Chihota
Hurukuro naVa Moses Jiri